Intlalontle yingxaki, hayi iMithombo yeendaba | Martech Zone
Intlalontle yingxaki, hayi iMedia
NgoMvulo, Julayi 1, 2013 Douglas Karr
Izolo, ndive ibali elikhulu malunga nabahlobo kunye neentshaba. Ibali belimalunga nokuba kunzima kangakanani ukwenza umhlobo kunotshaba. Utshaba lunokwenziwa kumcimbi wamaxesha, kodwa ubudlelwane bethu bahlala buthatha iinyanga okanye iminyaka ukwenza. Njengoko ujonga kwimithombo yeendaba zentlalo, oku ikwangumbandela… wena okanye ishishini lakho ninokwenza into elula njengokuthumela i-tweet embi kwaye i-Intanethi iya kuvela kwintiyo. Iintshaba.
Kwangelo xesha, isicwangciso-qhinga sakho sokubonelela abathengi ngesixhobo sokufumana ingxelo kunye nokubonelela ngexabiso kubo kunokuthatha iinyanga, okanye iminyaka, ngaphambi kokuba umthengi alixabise ixabiso kunye negunya kwimizamo yakho yemidiya yoluntu. Ngapha koko, iinzame zakho azinakuze zikhule zibe bubuhlobo kwi-intanethi njengoko unethemba.
Kunzima kakhulu ukwenza umhlobo kunotshaba.
Ibali lalingengokuba malunga ne-intanethi… yayisuka kwindinyana yeBhayibhile. Anditsho ukuba ukukhuthaza nayiphi na ingcinga, ukubonisa nje ukuba le ngxaki ayiqalanga ngemidiya yoluntu. Ingxaki kukuziphatha komntu, hayi ngayo nayiphi na indlela yokuncokola. Imithombo yeendaba kwezentlalo ibonelela nje kwiforum yoluntu apho sibona le micimbi iziswa ekukhanyeni.
Njengokuba ndibukele i-Interwebs ihlasela abantu abadumileyo, abezopolitiko kunye neenkampani, ndiyazibuza ukuba ziziphi iindlela ezifanelekileyo eziza kubonakala ngathi kwixa elizayo. I-gurus eyazibhengeza ukuba ishumayela elubala kwaye inyanzelisa ukuba abantu, iinkokheli kunye neenkampani esizilandelayo zifumaneke kwi-intanethi… kwaye emva koko sibabambe ngaphezulu kwentloko xa besenza impazamo. Ngaba izibonelelo ziya kuqhubeka ukogqitha iindleko?
Ewe… ebomini senza neentshaba ngokulula… kodwa oko akusinqandi ekutyalomali ixesha lokwenza kunye nokugcina ubuhlobo obukhulu buphila. Kunokuba lula ukwenza utshaba kunomhlobo, kodwa izibonelelo zobuhlobo zigqithile kumngcipheko wokwenza utshaba.
Ukuphela kokuThotyelwa kwe-imeyile ngokuNgabhalisi.me
Ukhuseleko kunye noKhuseleko lweWordPress
Jul 1, 2013 ngo-9: 45 AM
Isihloko esinomdla kodwa inqaku alinikezi nayiphi na ingcamango njengesisombululo. Usawuphakamisa lo mbandela ulungile ngokwawo. Tnx
Jul 1, 2013 ngo-11: 20 AM
Andinaso isisombululo – kodwa ndijonge phambili ekuboneni ukuba iinkampani zilungisa njani na amacebo osasazo lwentlalontle okanye indlela abathengi abasabela ngayo kubugwenxa bemithombo yeendaba zentlalo njengoko ixesha liqhubeka.